Makeup | YUYU BEAUTY - Part 20
Half up Style
What’s YUYU BEAUTY
You are at:Home»Category: "Makeup" (Page 20)
Lipglossကိုအသုံးမပြုဖူးတဲ့သူကအများကြီးမရှိလောက်ဘူးနော်? Listickတစ်ခုတည်းနဲ့ နှုတ်ခမ်းအရောင်လေးက ပြောင်ပြောင်လက်လက်လေးမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ထိတွေ့ချင်စရာကောင်းတဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးဖြစ်အောင် Lipglossကို အသုံးပြုကြရအောင်။ 1.Lipstickနဲ့အရင်ဆုံး အရောင်ဆိုးပါ။…
သဘာဝအတိုင်းMake Upလိမ်းတာလဲကောင်းပေမယ့် Partyတွေညစာစားပွဲတွေအတွက် Celebrity-Style Make Up ကိုလုပ်ကြည့်မယ်။ Eyelinerနဲ့Mascaraကို အထူးအသုံးပြုထားပါတယ်။ Eye…
မိတ်ကပ်လိမ်းနည်းထဲမှ အခြေခံအကျဆုံးကို လေ့လာကြစို့။
အသားလှတဲ့သူကိုမြင်ရင် အားကျနေကျမှာပေါ့နော်။ အဓိကကျတဲ့ အခြေခံမိတ်ကပ်လိမ်းနည်း လှပတဲ့အသားရည်လေးဖြစ်ဖို့ လုပ်ကြည့်ကြစို့။ 1.အရင်းဆုံး အောက်ခြေကို လိမ်းပါ။ မိတ်ကပ်လိမ်းရာမှာfoundationမပါဘဲ…
အဆင့်၃ဆင့်နဲ့ လုပ်နိုင်တဲ့ Eyepencil အသုံးပြုနည်းနဲ့Eyelinerဆွဲနည်း
eyelinerမှာ gel Typeနဲ့ liquid Type ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ ဘယ်ဟာကသုံးရလွယ်ကူတယ်ဆိုတာမသိတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်နော်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ လွယ်ကူတဲ့နည်းနဲ့ Eyepencil…
mascaraကတော့make upထဲမှာမှ အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းပါဘဲ။Eyelash curlerနဲ့မျက်တောင်ကော့ဖို့ mascaraကို လိမ်းပါ။ မျက်တောင်ကို မျက်တောင်ကော့စက်ဖြင့် မှားညှပ်မိတာတို့ mascaraအသုံးပြုချိန်ပေကျန်တာတို့…
Eye shadowကတော့ အ၀တ်အစားနဲ့ဆံပင်အရောင်ပေါ်မူတည်ပြီး ရွေးချယ်တာဟာ အဲဒီနေ့ရဲ့အဓိကကျဆုံးအချက်ပါဘဲ။ အဲဒါကြောင့် ရွေးချယ်ထားတဲ့ အရောင်သုံးရောင်နဲ့ Eye shadow…
လှပတဲ့နှုတ်ခမ်းဆိုးနည်း၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့နှုတ်ခမ်းနီလေးကိုအသုံးပြုကျစို့။ နှုတ်ခမ်းဆိုးထားတဲ့မျက်နှာ နဲ့ နှုတ်ခမ်းမဆိုးထားတဲ့မျက်နှာက လုံးဝကွဲပြားစွာလှနေမှာပါ။ 1. အရင်ဆုံးနှုတ်ခမ်းအောက်ခြေကိုစတင်လုပ်ဆောင်ပါမယ်။ နှုတ်ခမ်းကိုခြောက်သွေ့အောင်လုပ်ပြီး Lipcreamကိုသေသေခြာခြာလေးဆိုးလိုက်ပါ။…
အားလုံးနဲ့သင့်တော်မယ့်ခဲဆွဲတံဝယ်ထားသလား? သင့်တော်ဆုံးအခြေခံခဲဆွဲနည်းကိုမှတ်သားထားပါ။ အမျိုးသမီးများအတွက်သဘာဝခဲဆွဲနည်းလေး! မျက်ခုံးမွှေးကမျက်နှာတွင်အရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မျက်ခုံးမွှေးခဲဆွဲပုံကိုလိုက်ပြီးမျက်နှာအနေအထားမှာလဲပြောင်းလဲသွားမှာပါ။ မှန်ကြည့်ပြီးပြင်ကြည့်ကြစို့။ 1. ဘာမှချယ်မထားတဲ့အဆင့် 2. အရင်ဆုံးမျက်ခုံးမွှေးbrushနဲ့လေးနဲ့အရင်ဆုံးတိုက်လိုက်ပါ။…
©COPYRIGHT 2016 YUYU BEAUTY